काठमाडौं आइपुगे हिमाल आरोहण गर्न बहराइनका राजकुमार - नेपालबहस
काठमाडौं आइपुगे हिमाल आरोहण गर्न बहराइनका राजकुमार
| १३:०७:५८ मा प्रकाशित
३१ भदौ, काठमाडौं । मध्यपूर्वको मुलुक बहराइनका राजपरिवारका सदस्यसहित १८ जनाको टोली हिमाल चढ्ने उद्देश्यले काठमाडौं आइपुगेको छ । उनीहरू विशेष विमान ल्याएर बुधबार बिहान सवा ११ बजेतिर त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन ।
हिमाल आरोहणका लागि बहराइनइनका राजकुमार नासिर बिन हामिद अल खलीफा नेपाल आएका छन । खुम्बु क्षेत्रको लोबुचे तथा उत्तरी गोरखाको मनास्लु हिमाल आरोहण गर्ने उद्देश्यका साथ राजकुमार खलीफासहित १८ जनाको टोली आज काठमाडौं आइपुगेको हो ।
टोली शेख इशा एयरवेजबाट विशेष विमानमार्फत नेपाल आएको हो । उक्त विमान आज बिहान ११ः०० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । टोलीमा बहराइन रोयल गार्ड ‘डिभेन्स फोर्स’ मा कार्यरत १५ बहराइनी र तीन बेलायती रहेको बताइएको छ । बहराइनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बहराइन अधिराज्यबाट राजपरिवारका एक सदस्यसहित १८ जनाको टोली लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहणको उद्देश्यसहित गए राति नेपाल प्रस्थान गरेको थियो ।
हिमाल आरोहणका लागि आएको सो टोलीले पर्यटन विभागबाट आरोहण अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । विभागका निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार आरोहणका लागि नेपाल आएको राजकुमारसहितको टोलीले हवाई उड्डयन मापदण्डअनुरुप क्वारेन्टाइनमा बस्ने र पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आएपछि मात्रै विभागबाट आरोहण अनुमति पाउनेछ ।
ब्रोइलर कुखुराका चल्लालाई रंग लगाएर लोकल भन्दै डेढ सय रुपैयाँमा बिक्री ! भर्खरै
पढाइ शुल्क तिर्न नसक्दा मिस्त्रीको काम शुरु ११ मिनेट पहिले
युवतीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या, शरीर खोलामा फालेर टाउको गायब ! २१ मिनेट पहिले
मास्क सिलाउन व्यस्त महिला ३१ मिनेट पहिले
कथा: कर्णकाे बयान ४० मिनेट पहिले
कोरोनाले शिक्षण अस्पतालकी कर्मचारीको मृत्यु, २०० स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ! ४५ मिनेट पहिले